Maxaad laga Ogyahay xaaladda carruur laga soo furtay Shabaab oo gacanta ugu jira Dowladda? – Xeernews24
Maxaad laga Ogyahay xaaladda carruur laga soo furtay Shabaab oo gacanta ugu jira Dowladda?
24. Januar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Wasaaradda Warfaafinta kuna qornaa luuqada af Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay caruurtii ay Dowladda soo furatay in ay si joogto ah u helayaan difaaca iyo xuquuq buuxda oo ay leeyihiin, iyada oo Dowladdu ay sheegtay in ay bixiso dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee caruurta.
“Ciidamada Ammaanka Qaranka Soomaaliya ayaa badbaadiyay 35 carruur ah oo lagu afduubay xerada Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe 19-kii Janaayo 2018, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay heshay macluumaad macquul ah oo ku saabsan xeryaha iyo dhaq dhaqaaqyada soconayay, Ciidamada amniga Qaranka sida ugu dhaqsiyaha badan ayay ku bilaabeen Howlgalkooda, ugu dambeynna way ku guuleysteen.” Ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Wasaradda Warfaafinta.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/F.jpg 359 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-24 18:22:102018-01-24 18:22:10Maxaad laga Ogyahay xaaladda carruur laga soo furtay Shabaab oo gacanta ugu jira Dowladda?
Dawladda Ingriiska oo dalka Soomaaliya ugu deeqday 21 Milyan oo gini. Xaaladda Abaarta ee Gobolka Salal